Al-Shabaab oo qisaastay gacan ku dhiigle dadka dhibaato ku hayay | Warfaafiye
Warfaafiye Somali News	Al-Shabaab oo qisaastay gacan ku dhiigle dadka dhibaato ku hayay
Jul 2nd, 2012 – by admin0
Maxkamadda Ururka Al-Shabaab ayaa xukun qisaas ah kula fulisay shalay meel fagaare ah oo ku taal magaalada Marka Gacan ku dhiigle Cabdi Maxamuud Cismaan (Qooreey).
Ninkani qisaasta lagu fuliyay ayaa horay u dilay dad rayid ah, hantidoodana ka qaatay, waxaana kasoo qeybgalay xukunka lagu fuliyay dadweyne fara badan iyo maamulka Shabaab ee Gobolka.
Gudoomiyaha Maxkamada ee Al-Shabaab ayaa sheegay in gacan ku dhiiglaha oo lagu magacaabo Cabdi Maxamuud Cismaan (Qoorey) horay u dilay labo nin, isla markaana uu ka hor qirtay maxkamada markii cadeymo la hor keenay.
Ehelada dadkii uu dilay ayaa dalbaday in loo qisaaso ninkan, taasoo markii dambe lagu fuliyay xukunka meel fagaare ah oo ay ku toogteen Ciidamo ka tirsan Shabaab oo si garba siman.
Al-Shabaab ayaa deegaanada ay ka taliyaan xukuno ku saleysan shareecada islaamka horay uga fulisay, waxaana xukunada qisaasta ay noqdeen kuwo yareeyay dilalka macno darada, walow wixii iyaga ka horyimaadana sidan oo kale xukuno ugu fuliya.